Jumbo Tube Trailer, China Jumbo Tube Trailer Manufacturers, Abanikezeli, Ifektri - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-SinoCleansky jumbo tube trailer iveliswa ngokwe-ISO11120, iDOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo lehlabathi.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-CNG kunye neegesi ezahlukeneyo zorhwebo ezinje ngeArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ecociweyo njl.njl. Inobungakanani besikhundla esikhulu sokugcina, ukusebenza kakuhle kwezothutho kunye nokuhambisa ngokulula.
Njengeyunithi epheleleyo, ngokuyintloko siyila iindidi ezimbini zekharavani: Inye luhlobo lwesakhelo setyhubhu enkulu yejumbo ethi iskid & chassis inokudityaniswa ngokukhululekileyo okanye yahlulwe. Enye yeBhandage yohlobo lwe-jumbo tube trailer ethi iskid & chassis zilungelelaniswe kunye.
Iitreyila zetyhubhu yejumbo zinengxelo yovavanyo yomntu wesithathu kunye nengxelo yeefektri eneenkcukacha. Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu ibandakanya uvavanyo kwisilinda nganye, kunye novavanyo lokuqina komoya weskid. Ingxelo yomzi-mveliso iya kubandakanya isiQinisekiso soMgangatho, iNcwadi yokuFundisa, ingxelo yovavanyo lwefektri, njl.